DateMyPet.com : ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
နောက်ထပ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်? မလုပ်ပါနှင့်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်လူများအဘို့တစ်အစည်းအဝေးဆိုက်? ဟုတ်ကဲ့.
DateMyPet.com များအတွက်စိတ်ကူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံပန်းခြံ၌ငါ့ခွေးကိုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်စဉ်ကာလအတွင်းစတင်. ထုံးစံအတိုင်း, ရှေးရှေးကျွန်တော်တို့ကိုချဉ်းကပ်နှင့်သူသည်အဘယ်သို့ချစ်စရာအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်လိမ့်မယ်. ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီစကားပြောမှဦးဆောင်မည်. အဲဒီစကားပြောဆိုချက်ရိုးရှင်းတဲ့သူ့နည်းသူ့ဟန်ဆွေးနွေးချက်မှသူတို့၏ဘဝအကြောင်းအသေးစိတ်အထိ. Total ကုမ္ပဏီသူစိမ်းများနှင့်ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေဟောင်းတူမျှစကားပြောဆိုခြင်းလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၏တန်ခိုးကြောင့်. သူတို့ကတစ်ဦးသည်သာမန် link ကိုပေး, ငါတို့ဘယ်သူတစ်ဦးနားလည်မှုကို.
ဒီလူတန်းစားပေါင်းစုံအပေါ်တွေ့ဆုံရန်ရိုးရာအချိန်ကြာမြင့်စွာပျော်ရွှင်စွာဇနီးမောင်နှံများအတွက်မှတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အအထိ. သူတို့ဘဝကအလွန်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း, ထိုလူအပေါင်းတို့သည်တိရစ္ဆာန်များအဘို့မေတ္တာမျှဝေ. တစ်ခုခုကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်ကတစ်ခုသို့မဟုတ် '' ဆင်းရဲ-To-ဖြစ် '' အဖြစ်. တစ်ခုတည်းသောမှစကားပြောခြင်း, ထိုသို့အခြားမိတ်ဖက်သူတို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဘို့အသူတို့ရဲ့မေတ္တာနှင့်သဟဇာတမဖြစ်သောကြောင့်အဘယ်သို့သူတို့ရဲ့ရက်စွဲများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအများတို့သည်လည်းအဆုံးသတ်ငါ့ကိုအအံ့အားသင့်. ဤအကွာအဝေး 'ကနေကျွန်မခွေး drooling ကိုမုန်း’ 'ရန်သူသည်ငါ၏ကြောင်မှမတည့်သည်’ နှင့်ဂန္ထဝင် '' ထိုသူသည်ငါကလေးငယ်များကဲ့သို့သူတို့ကိုငါကုသဆိုတော့အရူးရယ်ထင်သည် ''. ထိုဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အကြားရွေးရန်လာသောအခါ – ဒါကြောင့်အများစုအတွက်မ brainer ခဲ့သည်. အဆိုပါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ဝမ်.
ဒီတော့ဒီမှာငါတို့, “သင်သည်ငါ့ကိုချိန်းတွေ့ကြလိုလျှင်, သင်သည်ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချိန်းတွေ့ဖို့ရှိသည်”. ဤ website ၏နောက်ကွယ် drive ကိုက. သင်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုနှစ်သက်ကြောင်းပထမဦးစွာလက်သိလျှင်, ဒါကြောင့်အမှုအရာတွေအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်ကြောင်း. အဲဒီပေါ်မှာတင်တည်ဆောက်ရနိုင်မယ့်ခိုင်မာတဲ့ link ကိုဖြစ်.
DateMyPet.com ့အခြားချိန်းတွေ့ site ကိုမဖြစ်. ကျွန်မအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအတွက်ကြောင့်ရပ်ရွာဖြစ်ချင်တယ်. ချစ်ခြင်းမေတ္တာသို့မဟုတ်ချစ်ကြည်ရေးရှာဖွေနေ. ဒါကြောင့်ကြိုးစားနှင့်သင်ထင်သောအရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ.
သင်ကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်ကမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်လည်းကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါသည်. ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုသတိရ, “…ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချိန်းတွေ့”.
အသင်းဝင်များ : ထောက်ခံမှုမေးခွန်းများ, ကျေးဇူးပြု သင့်အကောင့်ရဲ့ login
Contributors: သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ site များအတွက်ဆောင်းပါးအကြောင်းအရာများကိုလိုပါက, datemypet.com ကို AT ကျွန်တော်တို့ကိုစာရေးသူကဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်
သတင်းထုတ်စုံစမ်းရေး: datemypet.com ကို AT ကိုနှိပ်ဖို့သင့်ရဲ့တောင်းဆိုစာတင်သွင်း ကျေးဇူးပြု.
ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2004, နေ့စွဲအကြှနျုပျ၏ပေတစ်ခုတည်းအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများအဘို့အဦးဆောင်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်လာခဲ့သည်. ဒီတိုးတက်မှုနှုန်းဆက်လက်ပိုကောင်းငါတို့၏ကိုယ်အင်္ဂါဝတ်ပြုဖို့, တွင် 2014, နေ့စွဲအကြှနျုပျ၏ပေ Venntro Inc မှအတူပူးပေါင်း (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာအုပ်စုတစ်စု) သူတို့ရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချိန်းတွေ့ကွန်ယက်၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမှ, ကမ္ဘာတဝှမ်းဆိုရင် single သန်းပေါင်းများစွာရောက်ရှိ.